FTA waxay ku boorinaysaa hay'adaha taraafikada Mareykanka inay kordhiyaan heerka tallaalka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Gaadiidka » FTA waxay ku boorinaysaa hay'adaha taraafikada Mareykanka inay kordhiyaan heerka tallaalka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • saaciday inay • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Safarka Tareenka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Maamulka Gaadiidka Federaalka (FTA) wuxuu ugu baaqayaa hoggaamiyeyaasha gaadiidka inay macluumaadkaan la wadaagaan shaqaalaha, iyo inay sameeyaan wax kasta oo aad awooddo si aad ugu dhiirrigeliso tallaalka shaqaalahaaga dhexdooda.
Heerarka tallaalka COVID-19 ayaa sii kordhaya Maraykanka oo dhan.
Niyad -jabka xagga tallaalka ayaa sidoo kale hoos ugu dhacay waddanka.
Hay'adaha gaadiidka Mareykanka ayaa ku boorriyay inay hubiyaan tallaalka shaqaalaha gaadiidka.
Maaddaama heerarka tallaalka COVID-19 ay sii fuulayaan dhammaan Dawladaha Midaysan, Maamulka Gaadiidka Federaalka (FTA) wuxuu ku boorrinayaa hay'adaha gaadiidka inay hubiyaan in shaqaalaha taraafikada iyo bulshooyinku ay haystaan ​​fursad kasta oo ay ku heli karaan tallaalka.
Sida laga soo xigtay Mayo Clinic iyo Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC), labadii bilood ee la soo dhaafay, dad badan oo Mareykan ah ayaa bilaabay in laga tallaalo COVID-19. Waxay ahayd waqtigaas in Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ay oggolaadeen tallaalka Pfizer-BioNTech COVID-19 bishii Ogosto 23.
Kalsooni darrada xagga tallaalka ayaa sidoo kale hoos u dhacday, sida laga soo xigtay ra'yi ururin Ipsos ah. Kaliya 14 boqolkiiba dadka Mareykanka ayaa hadda sheegaya in aysan u badneyn in la tallaalo.
Maamulka Gaadiidka Federaalka (FTA) wuxuu ugu baaqayaa hoggaamiyeyaasha gaadiidka inay macluumaadkaan la wadaagaan shaqaalaha, iyo inay sameeyaan wax walba oo aad ku dhiirri -gelin karto tallaalka shaqaalahaaga dhexdooda. Hay'adaha qaarkood waxay bixiyeen fasax lacag ah si ay u helaan tallaalka, abaalmarino lacageed, ama kaararka hadiyadda si loogu dhiirrigeliyo shaqaalaha inay is tallaalaan.
Intaa waxaa dheer, hay'adahaas oo aad uga shaqeeyay dhiirigelinta tallaalka bulshadaada, waxaan kuu rajaynaynaa inaad sii waddo dadaalladaas, oo aad bilowdo kuwo cusub. Dad badan oo Ameerikaan ah ayaa doonaya tallaalka iyo sii -socodka ayaa ka caawin kara inay tagaan ballamaha ama u keenaan fursadaha tallaalka bulshooyinkooda. Si aad gacan uga geysato wadaagista farriinta tallaalka ee bulshadaada, qiyaasta CDC ee heer degmo ee ka gaabinta tallaalka ee COVID-19 ayaa tilmaami karta aagagga adeegga nidaamkaaga gaadiidka oo laga yaabo inay u baahdaan caawimaad dheeri ah si loo gaaro tallaalka.
Tallaalku waa habka ugu wax ku oolka badan ee naftaada iyo dadka kugu xeeranba looga ilaalin karo inaad qaaddo COVID-19. Si kor loogu qaado ka -hortagga kala -duwanaanshaha Delta oo looga hortago suurtogalnimada in lagu faafiyo dadka kale, CDC waxay kula talineysaa qof walba inuu is -tallaalo sida ugu dhaqsaha badan. FTA waxay ku boorineysaa shaqaalaha safka hore - iyo wakaaladaha gaadiidka ee ay u shaqeeyaan - inay sameeyaan qorshayaal ay naftooda ku tallaalaan oo ay sii wadaan inay u fududeeyaan marin u helidda goobaha tallaalka xubnaha bulshada ee aan weli helin tallaal.
FTA waxay taageeraysaa dadaallada tallaalka ee hay'adda taraafikada iyada oo ku abaalmarineysa deeqo hoos timaada Qorshaha Samatabbixinta Ameerika si ay gacan uga geysato daboolidda kharashyadan iyo dhiirri -gelinta hoggaamiyeyaasha gaadiidka si ay u siiyaan adeegyo u suurtagelinaya bulshadooda, oo ay ku jiraan shaqaalahooda, si ay u helaan tallaalkooda. Wakaaladaha gaadiidka ee raba inay helaan macluumaad dheeri ah oo ku saabsan u-qalmitaanka maalgelinta waa inay booqdaan Su'aalaha FTA ee la xiriira COVID-19.
FTA waxay sidoo kale ku dhiirrigelisaa wakaaladaha gaadiidka inay adeegsadaan CDC, Waaxda Gaadiidka Mareykanka iyo Maamulka Badbaadada Shaqada iyo Maamulka Caafimaadka (OSHA) qalab si ay gacan uga geysato kordhinta kalsoonida iyo qaadista tallaallada COVID-19 ee ka mid ah shaqaalaha gaadiidka.